Technorati Rank WordPress Plugin Version 2.0.4 Oo La Sii Daayay | Martech Zone
Axad, Abriil 22, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaan (ugu dambeyntii) ku saxay arin la leh Technorati Rank WordPress Plugin taas oo saxaya arin la xiriirta awood la'aanta in la qoro ama la furo faylka khasnadda. Waxaan kudaray subdirectory-ka keydka kumbuyuutarka kumbuyuutarka oo hadda ayaan ku kaydiyaa faylka keydka ah galkaas.
Qalabka ayaa wali u baahan PHP5 + (SimpleXML) iyo usu maktabada Haddii martidaada aysan haysan tii ugu dambeysay uguna weyneyd, waxaan kugu dhiirin lahaa inaad u cusbooneysiiso martigaliye cusub. Waxaad ka heli doontaa kuubo loogu talagalay a sanadka bilaashka ah martigelinta martigaliyahayga RSS feed.
Intaa waxaa sii dheer, waxaan ka shaqeynayaa wanaajinta qalabkan oo leh qaab muuqaallo dheeri ah (mahadsanid Technorati Caawinaad halkaa ah!). Waqtigayga firaaqada oo dhan - dabcan!
Apr 22, 2007 at 3: 48 PM
Kaliya waxaan kudaray bloggaaga faaska.
Magaceyga teknoolajiyadeed waa gavino.
Waxaad ku dari kartaa balooggeyga faaskaaga adigoo gujinaya xiriiriyahan.
Apr 23, 2007 at 4: 44 PM
waxaad u maleyn kartaa inaan doqon ahay laakiin anigu ma ihi qof IT ah.
Waxaan rakibay tiknoolajiyadda Tiknolojiyadda laakiin waxaan helayaa fariintan.
Ma awoodi doonaa inuu ii sheego meesha aan ku qaldamayo?
Apr 23, 2007 at 5: 02 PM
Doqon ma ahan gebi ahaanba chinam! Qalabka wuxuu ku shaqeeyaa isagoo u qoraya nuqul ka mid ah natiijooyinka galka si aysan ugu qasbaneyn inuu la xiriiro Technorati markasta. Tan waxaa loo yaqaan 'caching'. Xaaladdan oo kale, waxay u muuqataa in qalabku uusan lahayn rukhsad ku habboon oo uu ugu qoro galka plugin / khasnadda. Haddii aad ku dejin kartid rukhsadaha galkaas, waxay u baahan doonaan in wax laga beddelo si ay u helaan oggolaansho buuxda (CHMOD 777).
Apr 28, 2007 at 8: 03 AM
Waad ku mahadsantahay qalabkaaga WP, Douglas. Waxaan ka helay cilad yar interface-ka maamulka ee aad u maleyneyso inaad saxdo: sanduuqa xulashada ee sanduuqa uusan si fiican u shaqeyneynin Tani waxay u sabab tahay khadkaaga:
haddii (($ wptr_hours == "4") || ($ wptr_hours = ""))
in la dejiyo xulashada haddii aan horay loo sii dhigin. Waan hubaa inaad arki karto inaad u baahan tahay 'isbarbardhig' kiiska labaad, ee aan ahayn 'meeleyn' –taas oo ka dhigeysa qiimaha $ wptr_hours, marka ma dooraneyso mid ka mid ah xulashooyinka waxaadna ku egtahay '1 'asal ahaan Waxaan rajeyneyaa inay tani caawinayso!
Apr 28, 2007 at 10: 16 AM
Waad ku mahadsan tahay helitaanka Dan! Waxaan sameeyay wax ka beddelka oo waxaan soo geliyay v 2.0.5:
haddii (($ wptr_hours ==? 4?) || ($ wptr_hours === null))
Jul 7, 2007 markay ahayd 10:00 AM
Waad ku mahadsantahay qalabkan Douglas.
Waxaan arki karaa bartaada internetka inay leedahay goode goos goos ah Technorati. Sii wad!
Jul 7, 2007 markay ahayd 10:35 AM